UDig, umbono wokuqala-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/uDig, ukuqala ukucinga
Geospatial - GISGvSIGUkuprinta kokuqalaUDig
Sele sele sibheke ezinye iilwimi Vula Umnikezi kwindawo ye-GIS, phakathi kwabo qgis kunye ne-gvSIG, ngaphandle iiprogram ezingenanto siye savavanya ngaphambili. Kule meko siza kuyenza nge Umsebenzisi-Umhlobo we-Desktop kwi-Intanethi ye-GIS (UDig), omnye wabangena PortableGIS.
UDig lwakhiwo lenkampani Iziphumo zokuPhando, ngubani emva kokufumana umvuzo obalulekileyo oxhasiweyo GeoConnections, batyale imali kule nenye into. I-UDig inelayisensi phantsi kweGNU LGPL, le nkampani inetyala lokuphuhliswa PostGIS kunye negalelo elikhulu kwiGeoserver.
Kuphuhliso oluhle, ukuphula iindibano ezininzi zezixhobo zendalo, ngobuso obufanayo QGIS. Phakathi kwezi zinto zingakhankanywa:
Eyakhelwe kwiJava, phantsi kwe-Eclipse imo (njenge-gvSIG)
Inkululeko yokuqwalasela isixhobo esibonakalayo siyakwazi ukwenza, ukukwazi ukutsala iifestile phantse naphi na, ukuyiqhuba kwimvelaphi, ukudonsa kwangaphandle nangaphakathi, ukunciphisa iifowuni kwaye uguqule ngokukhululekile umda iifom.
Isantya sokusebenza kuhle kakhulu (nangona kunjalo ngeJava, ndayilinga ukusuka Acer Aspire One, nge-Windows XP); Isebenza kwiLuxux kunye neMac, ngokucacileyo ngokusebenza kangcono.
Ngokumalunga nokufunda kweefom ze vector, kuphelelwana ngeefayile ezichanekileyo (ayifuni ukuyidlala, kml, dxf, okanye dwg) kodwa ezitshayiweyo (gml, xml) zezi. Umntu kuphela wendabuko ofundayo ngu ifayile kwifom.
Ngemifanekiso ye-raster nayo inokulinganiselwa kwayo, kodwa unamathela kwiinkonzo ze-wms kunye nezinye iinkonzo ze-intanethi.
Ngokwemigaqo yolwazi i-ArcSDE, iDB2, i-MySQL, i-Oracle Spatial, PostgreSQL/ I-PostGIS kunye ne-WFS, ngoko ngezinye zezi zinto unokudibanisa idatha ye-vector engenaye ngendlela eqhelekileyo.
Igridi, ibha yesikali, kunye nelivo zidityanisiwe ngokungathi zizileya. Oku kunomdla kuba ayisiyonto yokusebenza kwe-interface yokuhambisa kodwa yedatha. Nangona ubumbeko lwayo lunzima (okokuqala ngcamango)
Inempawu ezenza ukuba zenzeke, njenge:
-kopisha / unamathisele de Iimbonakalo (njengoko GIS asibonise)
-njengoku XML en i mpopasho
-isimboli esinobuchule kakhulu, kunye nezilumkiso ugweme iingxaki ngemibala eyimfama, abagadi be-CRT, abaprojekthi, abagadi be-LCD, ukunyathelisa umbala kunye nokukopa.
Into enomdla kukuba, esi sixhobo sihlala siza nomzekelo ocwangcisiweyo, obandakanya indawo yaseCanada kunye nesiseko sezixeko, amazwe, ixesha kunye nemifanekiso yesathelayithi. Esi sicwangciso silunge kakhulu ukuqonda amandla aso ngalo mzuzu wokusibona okokuqala, into ethi ezinye iinkqubo ezikhuphelayo, zenze kwaye zenze umbuzo omkhulu kufuneka ziwuqwalasele:Kwaye ngoku ndiyenza ntoni ngala maqhosha??
Ukujonga uhlaziyo kwi-Intanethi lolunye uphawu olusebenzayo ekufuneka ezinye iiprojekthi ziqwalasele. Kule nto, ifana ne-gvSIG, kukho isithintelo kwimbonakalo yokuqala, kwaye loo nto kukuba ubutyebi obukwizandiso abunakho ukuthengisa okwaneleyo okanye kuswele umsonto oqhelekileyo okhuthaza ukuba luncedo (kwaye kwimeko leyo imeko esemthethweni). Ubuncinci, ngolu hlaziyo lwe-Intanethi (olungenayo i-gvSIG), emva kwemizuzu embalwa yokukhuphela ndinokubona amandla amaninzi athe awafumana kulwandiso lweGrass, JGrass, SEXTANTE, Umshini weHorton kunye neAxios kwizicelo ze-hydrological, imizekelo ye-3D, ukusebenzisana kwe-GPS, i-shaker kunye ne-vector.
UDig yenza izinto ezithakazelisayo, njengeQGIS izaliswe neJGrass, kodwa njengesisombululo se-GIS akusiyo ithuluzi elivulekileyo lomthombo, ngokubhekiselele kumsebenzi wokwakha i-vector kunye nolawulo lwe-topology, luphezulu QGIS (kunye nezandiso ezizisa) kunye GvSIG (ngaphandle kolwandiso). Ngelixa ivuthiwe, kwaye inakho oko umsebenzisi oqhelekileyo anokukufuna, amandla ayo omsebenzisi onamandla ophuhliso lweJava; Ingqwalasela yakho GIS ye-Intanethi Kunengqiqo ukudibanisa idatha kunye nokukhangela izilungiso kodwa ngokushicilelwa kukuncinci ukunikela (i-Geoserver iyenzayo).
Funda ambalwa amafomathi e-CAD / i-GIS, akakwazanga ukudibanisa uluntu kwi gvSIG, kwaye, kule nto, imfuno yabasebenzisi kunye nezivumelwano eziqilileyo yinjini ebalulekileyo ukukhawuleza uphuhliso, umbandela ayibonakali ukufezekiswa ekukhuthazeni i-gvSIG (ewe kwinqanaba laseKhanada, kodwa kungekhona kwihlabathi).
I nyaniso izicwangciso yenza ukuba ulahlekelwe ngamaphuzu ambalwa, abaninzi abasebenzisi baphumelele ekulawuleni ekuqaleni (ekulawulweni kweeprojekthi, iikhathalogu kunye neembono). Ukufumana ezi ngongoma lula ukuba unake wazi ukuba ungasebenzisa njani, nangona kwifilosofi yaseJava kufuneka uzinakekele ibhalansi ukwenzela ukuba isiseko esisiseko kunye nezandiso (ezenza ingqiqo) azibukeka ngathi (kwimvelo yazo) apho iphoshelwe khona imifanekiso emininzi ngelinye ilanga silahlekelwa, okanye ukuvumelanisa, okanye umlinganiso, okanye ixesha elifanelekileyo.
Engaziwa kakuhle luyingozi kakhulu (eyenzeka kwabanye abaninzi), ukuba isisombululo kwiqela elikhethiweyo akusiyo isiqinisekiso esihlala ixesha elide, kungekhona kwizicelo Vula Umnikezi; ngenxa yoko, ncinane inkqubo amava kunye maxwebhu, nangona umthetho wayo wokwenza izigqibo ezintsha uyathandeka. Kumasipala, iDig inokuba sisisombululo esisebenzayo, kodwa ukufumana inkxaso noqeqesho kunokuba njalo ingxaki ezinzima (kude British Columbia); kukhangeleka ngakumbi iiprojekthi eziza kuqukwa ngumntu kwaye ziza kuba nebhajethi ukuze zixhaswe (umz. indawo, ubungozi).
Ngaphandle kweprojekthi yeepatata zasePeru kunye nantoni na iAxios ingxelo, encinci ivile ngeDig kwimimandla yaseSpeyin; ukuqhubeka kwezicombululo zolu hlobo kwizinga lelizwe kuxhomekeke ekusebenziseni nkqubo lokufudukela kwiprosoft ekhululekile, isihloko esicothayo kwiLatin America.
Eyona nto inzima kakhulu yokuba ndiyibona iDig ukugcinwa kwexesha elide, into yokuba isixhobo esixhaswa yinkampani yabucala ibangela ukungabaza kwimibandela enjengale:
Kwaye ukuba ngaba uPhando loPhando lubonisa ngelinye ilanga ukuba iindleko zokuqhubeka nenkxaso kunye nophuhliso zingenakulondolozwa, ngubani oya kuthi?
Ingaba uluntu oludaliweyo luya kubakho ukukhula kokukhula kwehlabathi, xa kunokwimeko ephezulu?
Azikho na ezinye iiprojekthi zeJava / Eclipse ezenza okufanayo, ezi Vula Umnikezi, yintoni ebonakala iphinda imizamo?
Akubonakali ukuba izixhobo zokusebenza zamahhala zicwangciso zenkampani ekugqibeleni zishiya zibophe inkxaso?
Ngokuqinisekileyo i-mara vula Iimpendulo ezicacileyo ezi ngasentla, kodwa kulungile ukucinga malunga nokuzinza, okukuyo kulukhuni kwiiprojekthi ezikhululekileyo, kuba ukuba sihlula iinkalo zobuchwepheshe kunye nobuchwepheshe obubonakala busebenza ngokucacileyo, umbandela wezemali ku yibuza ekuqhubekeni. Namhlanje siphila kumaxesha apho inkanyamba iwisa inkqubo yezoqoqosho kwihlabathi, a zapatazo kwingqungquthela inokubangela imfazwe ephelile ngosuku olulodwa ngeempawu ezimnandi, ukuwa kweemakethe zentengiso ngaphantsi kweyamkelekileyo kwenza iinkampani ezinkulu zihambe esihogweni ngaphantsi kweyure.
Ezi zinto, senze sicinge ukuba phambi kobubanzi obuninzi (kwaye ewe kuninzi) yezisombululo ezinika inkululeko epheleleyo emntwini, ukusasazeka kwemizamo kunye nemali kusengozini (kuba ekugqibeleni loo nto ibiza). Inkululeko inokuthi ibe ninzi kakhulu, kangangokuba ngenye imini ingasetyenziselwa ukushiya iiprojekthi ngezigqibo zabanye ababengabasunguli bengcinga yoqobo. Kule meko, ngokuqinisekileyo uninzi sele lubhalile, kodwa kufuneka siqhubeke nokucinga ngononophelo, sikhumbula ukuba ngenye imini utyalo-mali luya kulinganiswa ngempembelelo hayi ngegeofumada.
Njengoko uphuhliso: lukhulu kakhulu kwaye luncedo, ezinye iiprojekthi kufuneka zixelise iingcamango ezivela apha.
Njengesisombululo: sinokulinganiselwa okukhulu xa kuthelekiswa nabanye kwinqanaba layo, (ngombono wokuqala)
Njengeprojekthi: uhamba ngokukhawuleza kwaye akubonakali ukuba ukhawuleza.
Njengoko uvavanya izandiso, sinokukunika amaphuzu owongeza emva kokuqala.
I-Poker, enye indlela eya kwingxaki
Kodwa sele ndiyicombulule ngokukhuphela i-sqljdbc.jar kwi-folder ye-lib ye-JRE.
Yilungileyo iblogi yakho. Ndiyakuvuyela
Yaye yiyiphi inguqu yeJRE osebenzayo?
Ndicacisa ukuba ndiyifakile inguqulelo 1.2 yeDig kwi-XP. Kwimeko apho inceda ...
Ndandifake uDig kwaye ndayithanda.
Into kuphela engandivuyisiyo kukuba andiyazi indlela yokufikelela kwisiseko se-sqlServer 2008. Xa ndiyenza:
yongeza umaleko-> IdathaStores-> Iseva yeMS SQL
Ndifumana isilumkiso esithi: "Lo mzi-mveliso awufumaneki, ngokuqhelekileyo ubonisa i-JDBC engekho, okanye umfanekisoIO-EXT ungafakwanga kuwe JRE".
Kwaye zombini ifakwe kwaye ihamba ne-GEOSERVER. Ingaba ngumbuzo wendlela yokufaka iDig? Kwi-GeoServer kufuneka uhambise ezinye iilayibrari kwifolda ethile. KwaDig?
Ukuba umntu unenkcazelo, ndiyabonga ukuba banceda.
Nangona iSQL Server 2008 sele iquka inkxaso yendawo.
Ngaba unamathuba okuxhuma kwi-MS SQL Server 2008?
Yi Java. Hlola oku kukhonkco
Eyona nto igalelo lakho, ithuba elimsulwa awukwazi ukuba yiziphi iilwimi ezizixhasayo ukwandisa amandla alo? Ingaba ndiqhuba isifundo se-geomarketing kwaye ndinomdla kwiprogram ngaphakathi kwe-GIS
Ndiyabulela umnikelo, apha ndiyishiya isiqhagamshelo
UDiva ugijima kwiDIG! Kukho amancinci amancinci kwimozulu nesimo se-bioclimatic njengale. Yiprojekti apho enye imibutho ijoyina khona, leyo ngendlela ethile iqinisekisa ikusasa layo.
Ewe, uqinisile, kukho ukwandiswa okuthakazelisayo, okufana ne-Horton Machine, equka imizekelo enomdla kakhulu yedijithali kunye nezicelo ze-hydrological; kwaye, kunye ne-SEXTANTE, i-Grass kunye ne-JGrass ziza ezininzi izixhobo ze-raster kunye ne-vector.
Ndenze utshintsho olufutshane kwithuba, kodwa siya kubona kwezinye izithuba xa sisebenzisa izandiso.
Awunakuzikhawuleza ukuba ubeke izimvo. kunye nolwandiso lufumana ezininzi
Uqala ngesinyathelo esiqinileyo kwiForam ye-2019 Yehlabathi yeGeospatial e-Amsterdam